I-Broadway Musicals - Enye yezinto okufanele uzenze eNew York | Izindaba Zokuhamba
INew York ingenye yalezi zindawo ezinokunikezwa okubanzi kwezivakashi. Kungakho kunezinketho eziningi kakhulu esizohlala sizidinga izinsuku ezimbalwa ukuzifeza. Phakathi kwazo zonke, namhlanje sizohlala nesinye sezincomo kakhulu ezenzelwe bonke ababukeli: Umculo womculo obanzi.
Impela uke wezwa ngakho noma mhlawumbe ubukade ukhona. Kepha ngandlela thile, kungenye yezinto eziphambili okufanele zenziwe eNew York. Esinye sezikhathi ezingenakulibaleka esizorekhodwa kwi-retina yethu. Sizoyithokozela le ndlela futhi Times Square, ekugcineni uye kweminye imidlalo ngendlela yomculo noma i-opera.
1 Ukuhamba nge-Broadway ne-Times Square
2 Kungani umculo we-Broadway uba yinto okumele uyibone?
3 Umculo obaluleke kakhulu esizowuthola
Ukuhamba nge-Broadway ne-Times Square
Njengoba sishilo, iBroadway iyindlela ewela esinye sezikwele esidume kakhulu endaweni: iTimes Square. Ingxenye yokuqala kusuka eCity Hall kuya eBronx. Ngakho-ke endleleni yayo ishiya imigwaqo eminingi kanye nezindlela eziningi. Kepha kuyiqiniso ukuthi kuzo zonke, iTimes Square ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu. Ngasiphi isizathu? Ngoba yindawo lapho kugcinwa khona izinketho eziningi zokungcebeleka, ezineshashalazi ezingaphezu kwama-40 esizoba nazo eduze kwethu. Indawo ehlala imatasa impela, kodwa kufanele ukuthi uyithole.
Esigcawini, sizobona ukuthi izibani nezimpawu kusibamba kanjani. Uma ufuna ukuthola indawo kancane, ngaphambi kokuya embukisweni, ungayenza wazi wonke amathiyetha akhona phakathi kuka-6th Avenue no-8th Avenue. Kule ndawo ungafinyelela amanye amathiyetha abaluleke kakhulu, phakathi kwawo esingagqamisa kuwo womabili ama- 'Majestic' kanye ne'Imperial '.
Kungani umculo we-Broadway uba yinto okumele uyibone?
Noma nini lapho siya endaweni ethile, siyazivumela ukuthi sithathwe ngamasiko ayo kanye nezinketho zabavakashi asinika zona. Kulokhu, besingeke sibe ngaphansi. Njengoba umculo weBroadway uyingxenye yale ndawo, isiko layo nomlando wayo. Ngenye yalezo kukhombisa ukuthi kufanele uphile kanye empilweni yakho, okungenani. Njengoba kungokuhlangenwe nakho okucebisayo nokuhlukile, ngaphandle kokungabaza. Ngaphezu kwalokho, iningi lamagama adumile nobuso bezwe lokuzijabulisa nabo benze imidlalo ethile kule ndawo. Ngaphandle kokuqhubeka, kusuka kuGroucho Marx, Audrey Hepburn noma uRobert Redford kuJames Dean, Marlo Brando noma uGrace Kelly phakathi kwabanye abaningi.
Umculo obaluleke kakhulu esizowuthola
Kuyiqiniso ukuthi zingahlukahluka kakhulu nasemndenini wonke. Kwesinye isikhathi ziyashintsha, kepha kukhona ezinye ezibaluleke kakhulu. Eqinisweni, okuthandwa kakhulu yi 'ILion King', 'Chicago' noma 'The Phantom ye-Opera'. Kepha ngaphandle kokukhohlwa ezinye izihloko ezinjengokuthi 'Ababi', 'Les Miserables', 'Ubuhle neSilo' noma 'Mamma Mía'. Ngenkathi i-'Aladdin 'noma i-'Frozen', futhi ingenye yezidume kakhulu. Kubukeka sengathi abakwaDisney abanetimu ngaso sonke isikhathi yibo abathatha izikhundla eziphezulu. Noma ngabe uyazithanda lezi zihloko okukhulunywe ngazo, noma ezinye ongazithola ebhodini lezikhangiso, kungcono ukuthola amathikithi kusengaphambili emakhasini afana nalawa AmaHellotickets, iwebhusayithi ngeSpanishi, lapho ungathenga khona ngama-euro nangamakhasimende endawo. Eminingi yale misebenzi ijwayele ukuthengisa emasontweni edlule, ngakho-ke sincoma ukuthi singalindi ukuyithenga ebhokisini lehhovisi
Kuyiqiniso ukuthi asihlali sikhumbula noma ngoba kuyisinqumo ngomzuzu wokugcina, ukuthi asinawo amathikithi. Ungakhathazeki, ngoba uma usungene 'in situ', ungazithenga futhi. Uma ufuna ukuya embukisweni kuphela, kepha awunawo umbandela othile ngokukhethekile, kukhona ifayela le- Isitolo seTimes Square esinokuthengiswa kwamathikithi ngamanani amahle kakhulu, ngoba akuzona izihlalo ezisondele kakhulu esiteji. Kepha njengoba sisho, kuhlale kuyindlela ongayicabangela. Ngakolunye uhlangothi, enkundleni yemidlalo efanayo bazophinde babe namathikithi, futhi ngosuku olufanayo lomdlalo okokuqala ngqa ekuseni, banikeza isephulelo sokuqala ukufika.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ukuzilibazisa » Izinto okufanele zenziwe eNew York: Iya kumculo we-Broadway